Diploma in Business & Management - YEC Education
ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကျနေပြီလား? ဒီနေ့ခေတ်က ပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့ အလျှောက် အပြိုင်အဆိုင်ဖြင့် စီပွါးရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်ကို လေ့လာနေကြပြီ။ သင့်အနေနဲ့ အချိန်ဆွဲနေတုန်းလား? စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့ခေတ်မှာ Marketing, HR, Finance, Management အစရှိတဲ့ စီးပွါးရေပညာ လေ့လာစရာများလွန်ရလှသည်။ တကယ်လို့ ဒီပညာရပ်တွေကို စုပေါင်းပြီး Diploma တစ်ခုတည်းမှာ လေ့လာလို့ရနိုင်ရင် မကောင်းဘူးလား? ဒါဆိုအရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပဲ မဟုတ်လား? ဒါကြောင့် ဘာသာရပ်ခြောက်ခုကို Diploma တစ်ခုတည်းမှာလေ့လာလို့ရတဲ့ DBM Diploma နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးဖတ်ပေးပါ။ Diploma in Business & Management (DBM) Awarded by City of Oxford College (UK) Business Management ကိုလေ့လာလို့ရတဲ့ Pathway အများအပြားရှိပါတယ်။ ဥပမာ ABE, ICM, IQN အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘွဲ့ကလည်းရပြီးပြီ၊ လုပ်ငန်းခွင်လည်း ဝင်နေပြီ၊ တစ်ချိန်မှာ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ဖို့ MBA တက်ဖို့လည်း စိတ်ကူးရှိတယ်။ MBA ကိုတိုက်ရိုက်တက်ရင် အခြေခံမရှိမှာလည်း စိုးရိမ်တယ်။ UK Diploma တစ်ခုကိုလည်းလေ့လာထားချင်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ DBM Program က မိတ်ဆွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးစီမံခန့် ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ General နဲ့ Specialization ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Business Management တို့ က Generalize ဖြစ်ပြီး Marketing, Human Resource Management ဘာသာရပ်များက Specialize ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စီမံခန့် ခွဲမှု Diploma ကို ပထမဆုံးလေ့လာမယ့်သူဖြစ်ပါက Diploma in Business & Management (DBM) ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Diploma in Business & Management သည် UK ရှိ Oxford မြို့အခြေစိုက် City of Oxford College မှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်မည့် Professional Diploma ဖြစ်ပါသည်။ � QCF Level 3
တခြား Single Subject Diploma တွေနဲ့ ဘာကွာသလဲ?
Single Subject ကတော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကို သီးသန့် လေ့လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ DBM မှာ Modules (၆) ခု ရှိပါသည်။ Marketing, Accounting, Economics, HR, Business Environment နှင့် Organizational Behavior တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ပို broad ဖြစ်သည့်အတွက် ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီကို အထူးပြု မလေ့လာမှီ DBM ကို တက်ရောက်သင့်ပါသည်။ Professional QCF Level3Diploma ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသည့် working professional များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
MBA ကို ဆက်လက်တက်လှမ်းမည့်သူများ
Middle Level Management တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ
Module (၆)ခု ပါသဖြင့် ဘာသာရပ်စုံစုံလင်လင် လေ့လာလိုသူများ
DBM သင်တန်းကိုတက်ရောက်တဲ့ သင်တန်းသားအများစုကတော့ MNCs Company မှ Middle Level Manager များနှင့်
MBA ကိုဆက်လက်တက်ရောက်မည့် သူများရှိသလို Business Management ကို စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ ပါရှိပါသည်။ \_
“Working Professionals များအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။”
မန္တလေးမြို့ရဲ့ ပထမဆုံး DBM သင်တန်းဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားပေါင်း ၃၆၀ များစွာကို မွေးထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ခြင်း
Assignment စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် စာမေးပွဲဖြေစရာမလိုဘဲ အလုပ်ခွင်ဝင်နေသည့် working Professionals များနှင့် အထူးသင့်တော်ခြင်း
Group Discussion ရှိခြင်း
Group Presentation လုပ်​ရခြင်း
Why Y.E.C ?
မန္တလေးမြို့မှာ DBM Program ကိုပထမဦးဆုံးစတင်ခဲ့ပြီး City of Oxford College မှ DBM program ကိုပို့ချခွင့်ရထားသည့် တစ်ခုတည်းသော Center ဖြစ်ခြင်း။ အတွေ့အကြုံရှိ Lecturers များဖြင့်​သင်ကြားပေးခြင်း။
Teacher Su Myat Naing Wai – BA (English) – Qualified for MA (University of Foreign Languages) – Graduate Diploma in Business Management – Level6(ABE, UK) – Global MBA (University of the Thai Chamber of Commerce, UTCC) – Director and General Manager @ Uni Hearts Travel & Tours, Mandalay
Teacher Kyi Pyar Myint Aung -B.Pharm, MBA (Mandalay University) -SKILLRISE MBA/MPA Entrance ClassDaw
စတင်မည့်ရက် – Jan 11 ( Saturday )
Every Saturday 3:00 PM to 6:00 PM
သင်တန်းကြေး – 390,000 kyats (သင်တန်းကြေးကို လေးကြိမ်​ခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။)
Y.E.C တွင်သင်တန်းတက်ဖူးတဲ့ သင်တန်းသားအ​ဟောင်းမှ Refer လုပ်ပါက – 10% off.
သင်တန်းကြေး တစ်ခါတည်းသွင်းပါက additional – 10% Off.
ယခင် YEC မှာ အတန်း တစ်ခုခုတက်ဖူးပါက additional – 10% Off.
စာသင်ခန်းမှာ ကောင်းမွန်စွာလေ့လာနိုင်အောင် Aircon + Free WiFi + Watercooler + Coffee + Snacks ထားရှိပေးထားပါတယ်။
City of Oxford College သည် နှစ်ပေါင်း ၅၉ နှစ်ရှိ UK ရှိ Oxford မြို့ အခြေစိုက် College တစ်ခုဖြစ်သည်။ Y.E.C Learning Center ၏ learning partner အနေဖြင့် 2016 မှာစတင်ခဲ့သည်။ Y.E.C Learning Center သည် City of Oxford College မှ Diploma in Business & Management (DBM) Program ကို တရားဝင်ပို့ ချခွင့်ရထားသော တစ်ခုတည်းသော Center ဖြစ်ပါသည်။
TES FE Awards – Outstanding use of technology (highly commended)
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမည့် အနာဂတ်တွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လိုသလား?
Y.E.C Learning Center ၃၉ လမ်း(ဗန်းမော်တိုက်လမ်း)၊
၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ရာဇာစင်တာ၊ မန္တလေးမြို့။